Maalinta Beeraha Puntland oo laga xusay magaalada Garowe [Sawiro & Dhageyso] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Maalinta Beeraha Puntland oo laga xusay magaalada Garowe [Sawiro & Dhageyso]
Maalinta Beeraha Puntland oo laga xusay magaalada Garowe [Sawiro & Dhageyso]
April 14, 2012 - By: Khalid Yusuf
Munaasabad lagu xusayo maalinta beeraha Puntland ayaa waxaa lagu qabtay xarunta hay’adda Cilmi baarisata Puntland ee PDRC waxaan munasabadaan soo qaban qaabiya wasaarda beeraha Puntland.
Munaasbda lagu xusaay maalinta beeraha Puntlanda ayaa waxaa kasoo qayab galay Madaxwaye ku xigeenka Dowalda Puntland Gen.Cabdisamad Cali Shire, Wasiirka Beeraha, Taliyaha ciidanka Booliiska Puntland ,xubno kamid ah beeralayda Puntland iyo masuliyiin ka socota hay’addaha.
Wasiirka Beerha Puntlanda Maxamuud Xaji Saalax Biriish kole oo munaasbdaan ka hadalay ayaa sheegay mudooyinkii ugu danbeeya ay beeraha Puntaland ay waxa soo saarkooda uu ahaa mida aad u sareeya tasoo ay keenatay wacyigalin dhinaca beeraha oo ay wasaarda ay waday.
Wasiirka ayaa xusay in 2025 ay isku filaansho dhinaca wax soo saarka ay Puntland yeelan doonto oo ayasan cuna danbe Puntland ka keensan dooni dibada tasoo ay beeraha Puntland waxaa kasoo ga ay intifaacsan doonaan, waa siduu Wasiirku sheegee.
Wasiiraka ayaa sidoo kale xusay in Wasaarda uu mudada sandka ah uu joogay uu kor u qaadaya tasoo xiliga uu imaanya ay hay’ ada meel joogtay xiligaa meel abuur ah balse dadaal dheeri ah oo ay shaqaalaha iyo asagaba galeen ay hormariyeen.
Madaxwayne Ku xigeenka Puntland Gen.Cabdisamada Cali shire oo isna goobtaa ka hadalay ayaa xusay in waxa soosaarka beeraha uu yahay muhiim ayna wasaardaan u asaaseen si ay Wax soosaarka beeraha Puntland kor ugu kaco.
Dhageyso Khudbada Gen.Cabdisamad
Madaxwayne Kuxigeenka ayaa sidoo kale waxaa uu xusay in marka beero lasoo qaado ay horay dadku u xasuusan jireen dhinaca labda wabi ee Soomaliya ku yaalay oo kaliya balse ay ilaahay mahadii tahay hadii maanta dhirataan iyo khudaarta halkaan taal ay tahay mid ka soo goday beeraha Puntland.
Munasabadaan lagu xusay maalinta beerha Puntland oo loo asteeya in ay noqato 12ka April tasoo lagu wacyi galinaayo laguna soo bandhigaayo waxayaabaha beeraha Puntland kasoo go’a, si ay dhiiri galin ugu noqato beeralayda Puntland waxaan munasanbadaa sidoo kale lagu soo bandhigay ruwaayad iyo heeso l0ogu talagaly kor uqaadida beeraha iyo dhiri galinta beeralyada Puntland.